रोचक सामग्री Archives | Page 15 of 15 | Daily State News
दुनियाँको यस्तो पहिलो बच्चा, जसको लिङ्ग अहिलेसम्म थाहा छैन
दुनियाको यस्तो पहिलो बच्चा, जसको लिंग अहिलेसम्म थाहा छैन क्यानडामा एकजना ८ महिनाका बच्चा छन् । उनको नाम शेरिल अटली हो । शेरिल विश्वको एकमात्र यस्तो बच्चा हुन् जसको अहिलेसम्म पनि लिंग पत्ता लागेको छैन ।उनको स्वास्थ्य परिचयपत्रमा कुनै लिंग खुलाइएको छैन । लिंगमा पुरुषको एफ वा महिलाको एमको साटो यू उल्लेख गरिएको छ । […]
स्कूलको होमवर्कः ‘आफ्नो सूसाइड नोट लेखेर ल्याउनू’
इन्डिपेन्डेन्ट डट को डट यूके बेलायतको एक स्कूलले होमवर्कमा आफ्ना विद्याथीलाई सूसाइड नोट लेखेर ल्याउने निर्देशन दिएको छ । स्कूलले ६० विद्यार्थीलाई अंग्रेजी कक्षालाई यस्तो होमवर्क दिएको हो । जसलाई सूसाइड नोट लेख्न निर्देशन दिइयो ती सबै सेक्सपियरको एक चर्चित नाटक ‘म्याकबेथ’ पढिरहेका थिए । यसले विवाद निम्त्याएपछि किटब्रूकस्थित थोमस ट्यालिस स्कूलले माफी मागेको छ […]
लत लाग्यो कुकुरलाई फिल्म हेर्ने !
एजेन्सी । एउटा कुकुरलाई फिल्म हेर्न लत लागेके छ । त्यो कुकुरले कुन ैदिन फिल्म हेर्न पाएन भने कुकुर बौलाएको जस्तो हुन्छ । यो कुकुर एक्लै बन्द कोठाभित्र बसेर फिल्म हेर्न मन पराउँछ । यो कुकुरले अहिलेसम्म १ सयभन्दा बढि फिल्म हेरिसकेको छ । ऊ फिल्म हेरेर खुबै रमाउँछ र फिल्मका खतरनाक दृश्यहरुमा भुकेर प्रतिक्रिया […]
अमेरिकी जोडीले गर्दैछ सात देशमा पुगी सातपटक बिहे, तेस्रो बिहे नेपालमा सकियो
अमेरिकी नागरिक ग्याब्रियला र टिमोथीले आफ्नो बिहे अलिक फरक ढंगले गर्ने निधो गरे । जस अनुसार, यो जोडीले ४० दिनमा विभिन्न ७ वटा देशमा पुगी ७ पटक नै बिहे गर्ने योजना बनायो । त्यो पनि सम्बन्धित देशको रितिरिवाज अनुसार । योजना मुताविक उनीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो पाँचौ बिहे सम्पन्न गरिसकेका छन् र अब थप दुईपटक बिहे […]
यसरी बन्यो दुनियाँकै लामो पिज्जा
यदि तपाइाको अगाडि टेबुलमा कसैले दुनियाकै सबैभन्दा लामो पिज्जा ल्याएर राखिदियो भने सुरुमा त त्यसको फोटो खिचिहाल्नुहुन्छ होला । अनिमात्र त्यसलाई खाने बारेमा सोाच्नुहुन्छ । अमेरिकाको लस एन्जल्समा विश्वकै सबैभन्दा लामो पिज्जा तयार पारिएको छ । उक्त पिज्जाको लम्बाई २ किलोमिटर छ । गत वर्ष इटालीमा तयार पारिएको लामो पिज्जाको रेकर्ड तोड्दै अमेरिकी पिज्जाले आफ्नो […]
लोग्नेकै अगाडि घोडासँग संसर्ग, घोडाबाटै गर्भ रहेको महिलाको दाबी
बिपि कोइरालाको कथा कर्णेलको घोडामा एक महिला आफ्नो बुढो लोग्नेको साटो घरमा पालेको तन्नेरी घोडासँग लसपस गरेको प्रसंग पढ्न पाइन्छ । तर कथाको यो काल्पनिक प्रसंग अमेरिकाको अर्कान्सासमा बस्ने एक महिलाको जिवनमा भने मेल खाएछ । यो घटना सन् २०१४ मा सार्वज्निक भएको थियो । जब एकजना महिलाले आफुले घोडासँग सेक्स गरेको र गर्भवती भएको […]
लोग्नेलाई सर्पले डस्यो, सँगै मर्ने भन्दै पत्नीलाई टोके
सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने भन्ने बाचा गर्ने जोडीहरु बाँच्न त सँगै बाँच्न चाहलान् तर जीवनसाथी मर्दा आफू पनि मर्ने हिम्मत जुटाउने कति होलान् ? भारतको बिहारमा एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । बिहारको समस्तीपुरस्थित वीरसिंघमपुरका शंकर रायलाई सुतिरहेको बेलामा विषालु सर्पले डस्यो । सर्पले डसेको केही बेरमा जिउ दुख्न थालेपछि उनी ब्युँझिए र अताल्लिए […]
इलेक्ट्रिक रेजरले दाह्री खौरिन्छ यो बाँदर
सोसल मिडियामा हालैका दिनहरुमा एउटा भिडियो भाइरल बनिरहेको छ । जसमा रातो रङको टिसर्ट तथा खुट्टामा कार्टून क्यारेक्टरवाला जुत्ता पहिरिएको एउटा बाँदरले इलेक्ट्रिक शेवर मेसिनले दाह्री खौरिरहेको छ । पहिलोपटक इन्स्टाग्राममा गत बुधबार यो भिडियो अपलोड गरिएको थियो । भिडियोमा देखिएकेा बाँदर घरपालुवा हो । बाथरुमभित्र कोही मानिसले उक्त बाँदरको दाह्री खौरिरहेको छ । बाँदर […]
भोकाएको बाख्राले क्वाप्पै खाइदियो मालिकको एक लाख
आफ्नो बाख्रालाई घाँस नखुवाई भोकै राख्नु एकजना मानिसलाई निकै महंगो परेको छ । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित कन्नौज जिल्लामा एकजना किसानले पालेको बाख्राले आफ्नै मालिकको गोजीबाट थुतेर ६६ हजार भारु अर्थात् झण्डै एक लाख रुपैयाँ खाइदियो । स्थानीय सर्वेस कुमारले आफ्नो घर बनाउनका लागि इँटा खरीद गर्न उक्त पैसा जम्मा गरेका थिए र इँटा किन्न जानका लागि […]
जब कुखुराले बजायो पियानो
तपाईंले आजसम्म पियानो बजाउने धेरै मानिसहरु देख्नुभएकाे होला । तर के कहिल्यै कुखुराले पियानो बजाएको देख्नु तथा सुन्नुभएको छ ? सायद छैन । तर हालै अमेरिकाको एक रियालिटी शो मा कुखुराले पियानो बजाउँदा सबै तिनछक परे । रियालिटी शो अमेरिका गट ट्यालेन्टमा यस्तो भयो कि त्यो देख्दा निर्णायक मण्डल र सबै दर्शक अचम्ममा परे । […]
रहस्यमय ठाउँ, जहाँ चराचुरुंगीले आत्महत्या गर्छन्
पंक्षीहरुले पनि आत्महत्या गर्छन् र ? पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, भारतमा एउटा गाउँ नै यस्तो छ जुन चराचुरुंगीको आत्महत्याका लागि चर्चित छ । जब सेप्टेम्बर महिना सुरु हुन्छ भारतको दक्षिणी असमस्थित दिमा हाँसो जिल्लामा पर्ने जतिंगा गाउँको चर्चा सुरु हुन्छ । गाउँ चर्चामा आउनुको कारण हो त्यहाँ चराचुरुंगीले आत्महत्या गर्नु । वास्तवमा अक्टोबर देखि […]